SKYPE NA-ENWEGHỊ NTANETỊ - N'IHI BEGINNERS - 2019
Skype na-enweghị ntanetị
N'oge na-adịbeghị anya, Skype maka Web ka dịịrị ndị ọrụ niile, nke a ga-amasịkwa ndị na-achọ ụzọ iji "online" Skype n'oge a niile na-enweghị nbudata ma wụnye usoro ihe omume na kọmputa - Ana m eche na ndị a bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ, yana ndị nwe ụlọ ọrụ, nke enweghị ike ịwụnye Skype.
Skype maka Web na-arụ ọrụ kpamkpam na ihe nchọgharị gị, ebe i nwere ohere ime ma nata oku, tinyere vidiyo, gbakwunye kọntaktị, lee akụkọ ihe mere eme (gụnyere ndị edere na Skype mgbe niile). M na-atụ aro ka ị lee anya otú ọ dị.
Achọpụtara m na iji mee ma ọ bụ mee vidiyo na vidiyo nke Skype, ị ga-achọ ịwụnye ihe mgbakwunye ọzọ (n'eziokwu, ihe nchọgharị mgbakwunye na-emebu dịka Windows 10, 8 ma ọ bụ Windows 7 software esiteghị na OS ọzọ, mana nke a Enweghi ike ikwunye na ntanetị Skype na Windows XP, ya mere na OS a, ị ga-ejikwa onwe gị dee ozi ederede naanị).
Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị chere na ịchọrọ Skype maka ihe kpatara na ị nweghị ike ịwụnye ihe omume ọ bụla na kọmputa gị (onye na-elekọta ya amachibidoro ya), mgbe ahụ, ntinye nke usoro a adịghị ada ada, na-enweghị ya ị nwere ike iji Skype ozi ederede mgbe ị na-ekwurịta okwu na kọntaktị gị. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, nke a bụkwa ihe magburu onwe ya.
Banyere Skype maka Web
Iji nweta Skype na ntanetị ma malite ịkpa nkata, nanị mepee web.skype.com na ntinye ihe nchọgharị gị (dika m ghọtara, a na-akwado ihe nchọgharị weebụ niile, ya mere ọ ga-enwe nsogbu na nke a). Na ibe a, tinye aha njirimara na paswọọdụ Skype (ma ọ bụ ozi akaụntụ Microsoft) ma pịa "Banye." Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike idebanye aha na Skype site n'otu ibe.
Mgbe ịbanye n'ime, a dịtụ mfe, iji tụnyere mbipute na kọmputa gị, windo Skype na kọntaktị gị, windo maka ịgbanwere ozi, ikike ịchọta kọntaktị na idezi profaịlụ gị ga-emeghe.
Tụkwasị na nke a, na mpịakọta nke mpio ahụ ị ga-eme ka ị wụnye Skype ngwa mgbakwunye ka olu na oku vidiyo ga-arụ ọrụ n'ime ihe nchọgharị (site na ndabara, naanị nkata okwu). Ọ bụrụ na ị mepee ozi ahụ, ma na-agbalị Skype na ihe nchọgharị, mgbe ahụ, a ga-echetara gị na ọ dị mkpa iji wụnye nkwụnye na ihuenyo dum.
Mgbe ị na-elele, mgbe ị wụnye nkwụnye a kapịrị ọnụ maka Skype Skype, olu na oku vidiyo adịghị arụ ọrụ ozugbo (ọ bụ ezie na ihu ya dị ka ọ na-agbalị ịpị ebe).
Ọ chọrọ nlọgharịa nke ihe nchọgharị ahụ, yana ikike site na Windows Firewall iji nweta Ịntanetị maka Skype Web Plugin, na mgbe nke ahụ gasịrị, ihe niile malitere ịrụ ọrụ. Mgbe ị na-akpọ oku, a na-eji igwe okwu ahọrọ dị ka ngwaọrụ Windows ederede ndabara.
Na njedebe ikpeazụ: ọ bụrụ na ịmalite Skype online naanị ileba anya na arụmọrụ weebụ na-arụ ọrụ, mana echeghị iji ya na-eme n'ọdịnihu (naanị ma ọ bụrụ na mkpa ngwa ngwa bilitere), ọ bụ ihe ezi uche wepụ nkwụnye ahụ ebudatara na kọmputa gị: Enwere ike ime nke a site na Ogwe Njikwa - Mmemme na Ngwa, site na ịchọta ihe dị na Skype Web Plugin ihe ahụ ma na ịpị bọtịnụ "Hichapụ" ma ọ bụ jiri ndokwa menu.
Enweghị m ihe ọzọ ị ga-agwa gị gbasara iji Skype na-eme ihe n'ịntanetị, ọ ga-adị ka ihe ọ bụla doro anya ma dị mfe. Ihe kachasị bụ na ọ na - arụ ọrụ (ọ bụ ezie na n'oge a edere, nke a bụ naanị mbipute beta) ma ugbu a, i nwere ike iji Skype na-ekwurịta okwu site na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla enweghị nsogbu dị mkpa, nke dị oke mma. Achọrọ m idekọ vidiyo banyere iji Skype maka Web, ma, n'echiche nke m, enwere ihe ọ bụla iji gosipụta: na-anwale ya n'onwe gị.